Izikipa / ipolo → iimpahla zomsebenzi • ubuchwephesha bobuchwephesha be-P & M
Iikipa / iipolo lukhetho olubanzi Izikipa ezikumgangatho ophezulu Ukufezekisa ukusetyenziswa kwemihla ngemihla, kokubini kubasebenzi kunye nakwimpahla yokwazisa.
Iintlobo ngeentlobo zeemveliso zikuvumela ukuba uhlengahlengise ukuthengwa kweemfuno zakho kwiipremiyamu kunye neendidi eziqhelekileyo. Izikipa ziyafumaneka kuyilo olwahlukeneyo, izimbo kunye nemibala, eneengalo ezimfutshane nezide. Ukongeza kwiiT-shirts / iipolosi zesintu, sinikezela ngezikipa ezilumkisayo ezinezinto ezibonakalayo.
Umgangatho ophezulu wee-t-shirts uqinisekisa ukuba umgangatho wazo ugcinwa emva kokuhlanjwa okuphindaphindiweyo, kwaye ubunzima babo obugqibeleleyo buqinisekisa ukuba bayigcina imo yabo yoqobo ixesha elide.
Ingqwalaselo ekhethekileyo kufuneka ihlawulwe kuqokelelo olusekwe kwitekhnoloji UKUSEBENZA NGOKUQHELEKILEYOesebenza kakuhle kakhulu kwiimeko ezinomngcipheko omkhulu wokubila. Ezo mpahla zinokusetyenziswa kungekuphela ngaphakathi kodwa nakwizakhiwo ezingaphandle, kuxhomekeke kwiimfuno.
I-T-shirts / ipolo-yonke imihla kintuthuzelo yokusetyenziswa
Iikipa / iipolo ithungwe ngengqwalaselo yeenkcukacha. Ukuphuculwa kobuhle kwiinkcukacha kuyenza ibe yimveliso eya kusebenza kumashishini amaninzi kunye nokwanda komzimba. Ziiseti yeeparameter zentsebenzo efanelekileyo. Amaxabiso okhuphiswano kunye nokukhethwa okubanzi kubaluleke ngakumbi xa kuthengwa iimpahla zabasebenzi bonke abasebenzi.
I-T-shirts ezenziwe ngamalaphu aguquguqukayo kunye nokuthamba okuthambileyo zinika uvakalelo lwentuthuzelo ngexesha lokusetyenziswa kwazo. Enkosi kwiipropathi zabo, baqhelana nomzimba ngelixa beqinisekisa inkululeko yokuhamba. Izinto ezinokuphefumla zinciphisa umngcipheko wokubila kakhulu, okona kubaluleke kakhulu kumaqondo aphezulu obushushu.
Iyafumaneka kwi Ivenkile I-T-shirts / polos ziyaxatyiswa kuyilo lwazo jikelele, olungapheliyo.
Zithandwa kakhulu Izikipa zomgangatho weprimiyamuezingenayo imigca esecaleni.
Ilaphu ekumgangatho ophezulu liya kumelana nokusetyenziswa kakhulu. Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba umfanekiso wabasebenzi uchaphazela umbono wohlobo. Kungenxa yesi sizathu ukuba utyalomali kwizambatho ezikumgangatho ophezulu kubalulekile ekugcineni ukubonakala okungenasiphako emva kweeveki ezininzi zokusebenzisa. Ngombulelo kwixabiso lokhuphiswano, ukukhetha iimpahla zabasebenzi akuyi kuba ngumthwalo omkhulu wezezimali.
Iikipa zabasebenzi imiqondiso yesilumkiso ziimveliso ezihlangabezana nayo yonke imigangatho ekhoyo ngoku yokugcina imithetho yokhuseleko. Baphucula ukubonakala kungekuphela ngaphakathi kwesakhiwo, kodwa nangaphandle. Isithembiso sethu sibandakanya kuphela iimodeli ezikumgangatho ophezulu ezivela kubavelisi abaziwayo. Ziza ngeendlela ezahlukeneyo, ezenza kube lula ukukhetha into efanelekileyo.
Uncedo olukhulu kukuba iipropathi zihlala zikho nasemva kokuhlanjwa okuninzi. Izikipa ezilumkisayo zenziwe ngezinto eziqinisekisiweyo ezingacaphukisi ulusu okanye zibangele iziphumo ezibi. Ngombulelo kubunzima bayo obuphantsi, ayizukuba ngumthwalo kwiimeko ezinobushushu obuphezulu. Zifanele bobabini isini.
Iikipa zonyaka ngamnye
Iikipa ezinemikhono emide ezinokubonelela ngokugqibeleleyo kuseto lwempahla zabasebenzi. Iimodeli ezikhoyo zigqityiwe ngoqwalaselo lwazo zonke iinkcukacha, eziza kuthi zanelise nabona bathengi baninzi. Ukomeleza iiteyiphu kunceda ekugcineni ifom efanelekileyo kunye nokunciphisa umngcipheko wendlela yelaphu. Izinto eziqinisekisiweyo zinolwazelelelo kulusu olubuthathaka.
Uyilo lomntu ngamnye
Zonke iimodeli zilungele isambatho sekhompyuter. I-T-Shirts / Polówki kunye nelogo yakho zifuna uyilo lomntu ngamnye oluya kulungelelaniswa ngokupheleleyo kukhetho lomthengi. Ukuphunyezwa komyalelo kuqala kuphela emva kokuvunywa ngokupheleleyo komthengi.
Ngoxa sisebenza, sisebenzisa phambili oomatshini kwipaki yethu yomatshini. Ngenxa yoko, oku kuguqulela kulungelelwaniso olwenziweyo lomsebenzi wobugcisa-nezona nkcukacha zincinci ziya kuphuculwa ngokupheleleyo.
Isikipa esimhlopheIsikipa esimhlophe sabasetyhini esineprintIsikipa esimhlophe esino shicileloIsakhelo somzimba i-t-shirt eprintiweyoIsikipa esimnyama esino shicileloisikipa esomileyo-isikipa esishicilelweyouqikelelo lucekecekile - isikipa esino shicileloIsikipa se-hm esineprintaI-jasa-t-shirt eneprintaI-logo tee-t-shirt eprintiweyoI-monogram ye-pocket slim tee-t-shirt kunye nokuprintaumzobo ogqibeleleyo-i-t-shirt eneprintaPhinda i-t-shirt eprintiweyoIsikipa seRobloxT-shirt enemigca eneprintai-t shirtI-t-shirt yokubeleka kunye nokuprintaIhempe yabasetyhiniIsikipa esimhlophe sabasetyhini esineprintIhempe yabasetyhini eprintiweyoI-t-shirt yabantwana eprintiweyoI-t-shirt yabantwana eprintiweyoI-t-shirt enemikhono emfutshane yabasetyhini eprintiweyoIsikipa samadodaI-t-shirt yamadoda e-allegroI-t-shirt yamadoda eprintiweyoIhempe yamadoda enephepha elimhlopheIhempe yamadoda enesithuthuthu esishicilelweyoUkuthotywa kwehempeIsikipa seRobloxIsikipa somntu omncinciIsikipa esishicilelweyoI-t-shirt eneprinta eyi-3dI-t-shirt eneprinta ye-allegroI-t-shirt eneprinta ebangwayoI-t-shirt eprintiweyo ye-allegro yabasetyhiniI-t-shirt enenkampani eprintiweyoIsikipa esine-gliwice eprintiweyoI-t-shirt enoshicilelo lwamadodaI-t-shirt enoshicilelo lwempuku lwe mickeyIsikipa esishicilelweyo ngasemvaIsikipa sokuprinta esiqhelekileyoIsikipa esishicilelweyo ngebhayisikileIsikipa esishicilelweyo ebusweniI-t-shirt eneprinta yeWarsawI-t-shirt eneprinta yempisiIsikipa esinooshicilelo lwakhoI-t-shirt enoshicilelo lwaseMpumaIsikipa esinooshicilelo lwakhoI-t-shirt enophawu lwayo lwe logoIsikipa esishicilelweyoI-t-shirt eprintiweyo efanelekileyo